Imisebenzi ye-MBA eDubai Yemisebenzi Ese-Freshers eDubai nase-Abu Dhabi
Imisebenzi ye-MBA eDubai yamaFreshers
Izikhala Zemisebenzi Yakwamanye Amazwe eDubai City
Kushicilelwe ngu Dubai City Inkampani at January 28, 2018
Imisebenzi ye-MBA e-Dubai
Sisebenzela imisebenzi ye-MBA yamaNdiya ne-Pakistani!
Imisebenzi ye-MBA ngaphakathi Dubai ukukhuluma ngokuvamile kungawo wonke umuntu eDubai. The Dubai City Inkampani ukuqasha ikakhulukazi eMpumalanga Ephakathi naseGCC. Amaqembu ethu okuqasha afuna abeluleki ngemfundo ye-MBA. Ngoba iningi le ngifuna umsebenzi e-UAE. The expats kokuba nemfundo ye-MBA.
Ngokuvamile, kudlala indima enkulu ekuxazululeni izinkinga zokuqashwa kwangempela komhlaba. Kalula nje izinkampani ezihamba phambili ezithatha abantu abane-MBA Education. Ngokuhamba kwesikhathi, ukuphonsela inselelo nabaphawuleka kakhulu izinhlangano e-Dubay for employment. Ngakolunye uhlangothi, izinhlinzeko zemisebenzi ekhokhelwa kahle. I-expat entsha engaba khona kufanele ibheke izinkampani zokuqasha. Indawo yomsebenzi we-Careerjet.
Iyasesha ukuthola umsebenzi wokufunda esifundeni saseMiddle East nasemhlabeni jikelele. Njengomeluleki, nge-MBA uzodinga ukuthuthukisa ikhono elihlukile. Ngekhono elihambisanayo elisethwe njenge-MBA. Nakanjani, kuzokhombisa ukubaluleka usizo lokufeza imigomo yakho yomsebenzi wesikhathi esizayo. Joyina Dubai City Iqembu lenkampani. Sifuna umeluleki omusha futhi azihlanganyele naye UAE.
Manje siQeqeza abaPhathi nge-MBA Education to Dubai Companies
Ingabe uye wazi kahle imfundo ?. Singa manje eseza abaphathi bamaNdiya ngoba Imisebenzi ye-MBA e-Dubai. Faka isicelo kuwebhusayithi yethu futhi Layisha kabusha ngoba Imisebenzi yase Dubai. Uma unezifundo ze-Ph.d noma izitifiketi ze-simillar ezifana ne-MBA. Ungaqala umsebenzi eMiddle East. Thola imisebenzi emangalisayo e-Emirates. Thumela Qalisa kabusha ngamathuba wemisebenzi engcono kakhulu e-UAE. Noma Ngibe ngu-a CEO uma une-edema ye-MBA. Sebenza e-United Arab Emirates. Qala Namuhla futhi uthinte Inkampani Dubai City. Ngakolunye uhlangothi, bheka Iwebhusayithi yokuqasha i-Monster. Kufanele ngempela ukusebenzisa ne-CV yakho.
Ungayithola kanjani ukuqashwa e-Dubai nge-MBA?
Kuze kube manje abakhethiweyo besikhathi. Ngubani obonisa intshiseko ekuhlaziyweni kokugcina kokuxazulula izinkinga. Ngokushesha noma uthole umbono osebenzayo wokuletha imiphumela enenjongo. Ngaphambili, imisebenzi yethu yenkampani e Dubai. Njengoba sinikezwe la maphuzu, sisiza abaphathi. Ukuqala ngabafuna phambili abafuna iziqu emhlabeni jikelele. Kuze kubaphathi abakhulu ibhizinisi abafuna umsebenzi ngemfundo ye-MBA.
Ngokwengxenye enkulu, i-Dubai izinkampani ezifuna abantu abanethalente nentshisekelo yokushayela e-Uber. Ngasikhathi sinye, siyaphatha Umsebenzi we-MBA e-Dubai for Indian Freshers. Ngaphansi kwalezo zimo, abaphathi abanekhono lobuholi. Ngenxa yalokho, shayela ushintsho phakathi nezinhlangano zaseMpumalanga Ephakathi. Ukuze uyibeke ngenye indlela, zama futhi ujabule kancane. Endleleni ekufuneni imisebenzi ye-MBA.
Ufuna umsebenzi nge-MBA ?. Ukuphela kokufanele ukwenze ukushaya ngqo kubanikazi bebhizinisi. Futhi lokho akuyona into elula ukuyenza. Udinga ukubathola ku-Linkedin futhi uxhumane nabo. Futhi ukusuka lapho. Sondela kubo futhi ubenze umhlanga wakho imininingwane yesicelo ye-Gulf imisebenzi.
Sisiza ngemisebenzi ye-MBA e-Dubai for Freshers
Kubalulekile ukwazi ukuthi imisebenzi ye-MBA eDubai enamaholo ayikho lula ukuthola. Futhi uma ulungile uthweswe iziqu nge-MBA. Futhi kunjalo futhi ngifuna umsebenzi. Kumele ukhumbule. Kuyinto engabaza kakhulu. Ukuthola umsebenzi omusha e-UAE. Ngokuvamile kuphela nge-MBA futhi akukho okuhlangenwe nakho. Ngokuqinisekile, thatha isikhathi.
Ngakolunye uhlangothi, uma ubheka nsuku zonke. Izikhala ezintsha ze-MBA eDubai. Kukhona umqondo omuhle osizayo ukufinyelela imisebenzi. Qala ngokufaka isicelo esiyisisekelo sabafundi abasha. Ngoba ukuthola lolu hlobo lwezikhala zemisebenzi akulula. Abaphathi abasha abavela nje abanemfundo. Kufanele gxila kakhulu emsebenzini wokuqashwa. Kalula nje ngoba banolwazi olwanele. Kodwa nje uthole isipiliyoni esisha esaziwayo.
Idolobha lase-Dubai linikeza amathuba omsebenzi omangalisayo wokuvuselela nge-MBA. Kungakhathaliseki ukuthi uyamangalisa kangakanani. Ukuthola umsebenzi ngaphakathi kweDaily City Area njalo ukuthatha isikhathi. Kunezinkampani ezimbalwa lapho ungathola amathuba emisebenzi. Kuthumela i-CV yakho njengomfundi oqeqeshwe ngokucophelela. Ungakwazi ngisho ukuxhuma ku-Linkedin
Indlela esheshayo yokuthola umsebenzi. Ikakhulukazi njengoba kuvuselelwa nge-MBA kuwukuthi isicelo se-Google. Izinkampani zobuchwepheshe obuphakeme nezinkampani ze-IT eDubai. Zikhula njengendaba emnandi. Ngoba kuze kube yi-2020 expo eDubai, zidinga ukulungiswa. Musa ukuchitha isikhathi sakho futhi uqiniseke ukuthi uzoba ne-CV elungiselelwe esandleni sakho lapho uyidinga.
Imisebenzi ye-MBA e-Dubai airport
Omunye wemisebenzi emihle kakhulu usebenza ku sezindiza. Ukuqonda imithetho nemisebenzi. Use imisebenzi kahulumeni ibalulekile ekuhlangenwe nakho komsebenzi we-UAE. Ngakho-ke noma ngabe yini isipiliyoni sakho. Imisebenzi ye-MBA eDubai Airport ihlala ivulekile. Ikakhulu abafundi abasha abaphothule iziqu. EsiKhumulweni Sezindiza eDubai. Abaphathi be-HR njalo ukufuna abazosha.
Udinga ukuxhumana ngqo nokuphathwa kokuqashwa. Namuhla ungathola imisebenzi emihle. Okuningi expats from Pakistan kanye neNdiya. Ukuba ne-MBA futhi angazi ukuthi kufanele wenzeni ngemfundo. Vele, ungacinga izikhangiso zasendaweni. Kepha njengoba besho njalo. Ukusebenza ngaphakathi Emirates e-UAE. Ungaba yinganekwane eMiddle East. Iningi labantu liyabheka ukuze abe i-expat e-Dubai kufanele futhi ufunde eziningana iziqondiso ukuthi ungayenza kanjani.
Njalo qinisekisa ukuthi izinhlelo zakho zokusebenza azizinalutho. Ngokuvamile, impela impela for mobile version abaqashi. Ukuba nemfundo ye-MBA ngokuqinisekile kwenza umuntu ofunde kahle. Ngakho-ke uhlelo lwakho lokusebenza kumele luvelele esixukwini. Abahambi abafunde kakhulu ngaso sonke isikhathi sokuqalisa kabusha okuhle kakhulu. Vele, abantu abane-CV enhle njalo ukuthola izikhala zomsebenzi. Impela lokho.
Kuya thola umsebenzi nge-MBA the smart indlela ukusebenzisa amasayithi omsebenzi. Zama ukucwaninga izimakethe eziningi, xhumana nabantu abaningi kakhulu. Isihluthulelo semisebenzi nge-MBA ukuthola ukuthola ukuqashwa kwabaphathi abane-MBA. Ngokuvamile, lokho kuzokunika isikhala esiningi sokuvula ukwakha umbiko. Ungakwazi thola abaphathi abaqashiwe eDubai.
Imisebenzi ye-MBA e-Dubai yePakistan
Ama-expatriates avela ePakistan njalo ukuya eDubai. Iningi labo lifuna imisebenzi ye-MBA eDubai ngamafreshers. Futhi ukucabanga ngokweqile ukuthola imisebenzi e-Dubai kuyoba lula. Empeleni abaqashi base-Emirates babathanda abaphathi abasha be-MBA. Kubaqashi e-UAE, akunandaba ukuthi bavelaphi.
Ngokolunye uhlangothi, ungathola izikhundla ze-CEO. Ngaphezu kwalokho, uma ufuna isikhundla esiphansi sokuphatha. Nakanjani, kufanele uzame amasayithi emisebenzi ezimakethe zasendaweni. Abafuna umsebenzi wasePakistan bangafaka isicelo kwabadala imisebenzi yokuphatha izikhala eDubai. Ngaphezu kwalokho, uma ungathanda ukubekwa. Indima yokuphathwa kwe-MBA ngokuyinhloko inesibopho. Ngokutholwa okusha kwamakhasimende nokuthuthuka kwebhizinisi. Ngesikhathi esifanayo ukulayisha kuqalele enkampanini yethu. Futhi sizokwenza indawo wena ngemisebenzi emisha e-UAE. Futhi, ukubuyekeza ukuthi imithombo yezenhlalo isisiza kanjani ukuthola umsebenzi.
Iningi le ivela ePakistan ithola umsebenzi e-Dubai. Akunankinga kubaqashi ukuthi badlulisele umuntu omusha ebhizinisini. Ikakhulu uma umuntu omusha ebukeka ukubekwa eDubai kusuka ePoland. Eminyakeni elandelayo, ubuchwepheshe bukhuphukile. Abaqashi kanye nabaqashi abaphethe izingxoxo ku-inthanethi ngaphezu kwe-skype.
Imisebenzi ye-MBA e-Dubai ye-Indian
Sengisho nje Imisebenzi eDaily emva kwama-MBA hr freshers amaNdiya. Ingabe amanye amadili amahle kakhulu abangawathola. Ngemuva kokuthola izikhundla zokuphatha. Ngolwazi lwe-MBA. Iqhaza likwenza ngokuyinhloko obhekene namakhasimende amasha eDubai. Ngakolunye uhlangothi, udinga ukuthola ukuthi uthole futhi ukuthuthukisa ibhizinisi.
Ngasikhathi sinye njengabaphathi eDubai. Kufanele usebenze ku ukuthuthukiswa kwamakhasimende amasha noma iphrojekthi ngisho nezimakethe. Ngaphezu kwalokho, bhekana nabaphathi abaphezulu nabaqondisi. Ngokubambisana kanye nabaphathi bamahhotela aphezulu e-7star e-Dubai. Ngoba ikakhulukazi abantu base-UAE abanemfundo ephakeme yokuphumula emahhotela amahle.
Ngendlela efanayo nokuphatha ukunyuswa komkhiqizo wethu. Ukwakha futhi gcina ukuqwashisa ngomkhiqizo. Njengoba abaphathi abaphezulu bekhulisa imisebenzi yomugqa. Ngophawu olufanayo khuthaza umkhiqizo wenkampani ukuthola okulitshe. Ukungasho ukuthi zilethe ibhizinisi enhlanganweni. Indian abasebenzi abasha eDubai basebenza kanzima. Kepha ezinye izizwe ezifana Abantu baseNingizimu Afrika nabo bathola imisebenzi yokukhokhela imisebenzi emihle. Ikakhulukazi e-Abu Dhabi lapho uHulumeni elawula izimali ezintsha.
Izinkampani zase Dubai zivulekele ama-CV amasha. Ngakho, imisebenzi emisebenzi yamaNdiya ezinkampanini zase Dubai nakanjani zivuliwe. Unalokhu engqondweni, inkampani yethu yakhiqiza izindatshana eziningana. Futhi sinethemba lokuthi wena isivakashi esisha uzothola imisebenzi e-UAE ngokufunda izingcezu zethu zezeluleko.
Amakhono Nezifiso Ezifunayo ngenkathi esebenza ne-MBA
Abazongenela iziqu ezisezingeni eliphakeme: Abakhethiwe be-MBA bafundile phesheya. Isibonelo i-UK noma Canada noma iYurophu. Empeleni, kumele okungenani ube ne-1-5years isipiliyoni emisebenzini yokumaketha nokuthengisa ukuqala nje njengomphathi omkhulu. Iningi labo iDubai Izinkampani. Dinga abazothatha izintambo abanolwazi olunamandla lokuthengisa.
Yize lokhu kungaba yiqiniso okuhamba phambili yilabo abazobe sebelungele ukuzulazula eDubai City. Ngoba ukuphatha amaphrojekthi amakhulu ebhizinisi. Ngasohlangothini olubi, ukhetho luzodinga ukwenza amakholi abizayo, Qoqa Idatha njll Futhi, kufanele ucabange ngakho umsebenzi waseyunivesithi e-Dubai. Ngemfundo enhle abasha abazoshaywa imisebenzi enamandla evela ezikoleni.
Omunye umkhakha lapho ungathola khona imisebenzi yinkampani yezezimali. I imisebenzi yasebhange e-United Arab Emirates ithandwa kakhulu. Ukuphela kokungakhathaleli okungelula ukuthi bakuthole. Futhi uma uzikhulula, akulula ukubuya. Amakhono Okuxhumana Okuhle futhi Ukuvezwa kwezwe lase-Afrika inzuzo eyengeziwe. Kalula uma ungathanda ukuqala ukusebenza e-Dubai.
Ok, ngakho manje sinezemfundo enhle endaweni. Udinga manje thola ukuthi ungathola kanjani umsebenzi e Dubai. Ngalokhu engqondweni, udinga ukwazi kancane mayelana nama-Emirates ayisikhombisa. I Indawo engcono kakhulu yomsebenzi ibe yi-Dubai. Futhi wonke umuntu ozovakashela i-UAE. Sizokutshela ukuthi kuningi izindawo eziningi zokuthola umsebenzi e-United Arab Emirates. Kukhona odumile u-Abu Dhabi noShariah. Kuzo zonke lezi zindawo nakanjani uzothola imisebenzi.
Enye yezincomo ezingcono kakhulu zeluleko inkampani yethu enikezayo yokuthumela e-Dubai. Ngokuvamile ukubukeka kwethu Umhlahlandlela wokuqashwa kabusha. Ngoba indlela enhle yokuthola abaqashi ku- I-United Arab Emirates ukusondela kubo ngqo. Udinga ukuxhumana nabaqashi futhi uqiniseke ukuthi bazoyithola ikharikhulamu yakho yezifundo. Enye yezibonelo ukuxhumana nabantu izinkampani zokuqasha izimoto. Konke okudingeka ukwenze kungena ngemvume nge-CV yakho futhi uqinisekise ukuthi bazobona inkulumo yakho yokuthengisa.
Kukhona umhlahlandlela wonke ukusebenzela e Dubai nase-Abu Dhabi. Inkampani yethu ibhalwe izindatshana eziningana mayelana nokufuna umsebenzi e-United Arab Emirates. Udinga ukuba nesipiliyoni esithile kanye nezifundo zesikole ngemisebenzi e-UAE. Futhi abamele inkampani yethu beluleka ngempela abantu indlela yokuthola umsebenzi e-Dubai. Kodwa asikwazi ukukusiza uma ungahlangabezane nezidingo eziphansi zabaqashi.
Njengoba sisitshela sicela usebenzise le Umhlahlandlela edolobheni leMumbai futhi sibheke yethu Umhlahlandlela Wokunakekela Izindiza Emirates. Ngokuqinisekile uzothola imininingwane ebalulekile kuwe. Abanye abafuna umsebenzi abavela ePakistan naseNdiya. Usenenhlanhla nabaningana imisebenzi inikeza kusuka kumhlahlandlela wemisebenzi yethu eKuwait.
Ungayithola kanjani umsebenzi we-MBA e-Dubai ngendlela esheshayo?
Kulungile, indlela esheshayo yokuthola umsebenzi e-UAE. Kuyasebenza hhayi eDubai noma e-Abu Dhabi kuphela. Kufanele ufake isicelo kubaqashi abavela kuwo wonke umhlaba. Isibonelo, ungathola ukuqasha izinkampani ezivela eSaudi Arabia. Futhi namanye amazwe e-GCC emsebenzini onjengeQatar neKwaiteni. Abaphathi be-MBA zenziwe ezizweni eziningana.
Futhi abantu abaziwa kakhulu e-UAE AmaNdiya, I-Pakistani futhi Abantu basePhilippines abafuna ukusebenza e-Dubai. Futhi iningi labo lithola izikhundla ezinhle ngoba baphila isikhathi eside e-UAE. Ukuphendula ukuthi ungawuthola kanjani umsebenzi eDubai ngendlela esheshayo kulula. Kumele sebenza futhi uhlale eDubai noma ku-Abu Dhabi uthole okuhlangenwe nakho okuthile abaqashi baseMiddle East. Bese ucinga amathuba amasha.
The baxoshe abesifazane ngemisebenzi abakhathalelwanga phansi. Ikhulukazi i-Middle East. Futhi empeleni, zinjalo ukuthola amathuba emisebenzi emangalisayo ezinkampanini ze-UAE. Vele ngamaholo akhokhelwa kakhulu. Ngoba abagxeki besifazane banendaba kakhulu ngesakhiwo sebhizinisi. Naka imininingwane bese ukhiqiza umthelela omuhle emsebenzini ngenkathi ehamba e-UAE. Ekupheleni kwalesi sihloko sicela uhlole ezinye amathiphu wezindleko ku-blog yethu. Sinethemba elikhulu lokuthi kuzokusiza ukuthola umsebenzi wamaphupho e-Emirates.
Ukusesha umsebenzi we-MBA ku-UAE!
Thola MBA UJob e-Dubai search engine ngokumangazayo ungathola lokho.
Vele uqale a umsebenzi omusha ku Dubai!
Layisha kabusha Emadolobheni Akhula Ngokushesha Kakhulu Emhlabeni! - Dubai City Inkampani manje esiza eSharjah
Inkampani yaseDubai City manje ukuhlinzeka ngemikhombandlela emihle yemisebenzi eDubai. Ithimba lethu linqume ukwengeza ulwazi ngolunye ulimi lwethu I-Dubay expats. Ngakho-ke, unalokhu engqondweni, manje ungathola izinkombandlela, amathiphu nomsebenzi kwi-United Arab Emirates ngolimi lwakho.